January 18, 2020 - khitalinmedia
သင့်အနားမှာ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ ဝိဉာဉ်ရောက်နေမှန်း သိနိုင်မယ့် လက္ခဏာ (၃) မျိုး
ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့လောကကြီးဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလောကကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဒီလောကကြီးမှာပဲ ကျင်လည်ကြတဲ့အတွက် တခြား ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လောကလည်း ရှိတယ်ဆိုတာကို လက်မခံချင်လို့တော့မရပါဘူး။ ဝိညာဉ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာ အတိအကျတောမသိပေမယ့် သင့်အနားကိုသူတို့ရောက်နေမှန်းတော့ သိလို့ရပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ သင့်အနားမှာ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ ဝိညာဉ်ရှိနေမှန်းသိနိုင်မယ့် လက္ခဏာတွေ ပဲဖြစ်ပါတယ်နော် … (1) အလိုက်ခံရတယ်၊ စောင့်ကြည့်ခံရတယ်လို့ခံစားရတယ် […]
အမျိုးသမီးများသတိထားကြပါ။ ဖြစ်သွားပြီးမှဆို မလွယ်ဘူး မိန်းကလေးများ သထိထားရန်ကူးယူတင်ပြလိုက်ပါတယ် …. ။ အမျိုးသမီး တစ်ဦးက ဓာတ်ဆီဆိုင်မှာ ဓာတ်ဆီ ဖြည့်နေတုန်း သပ်သပ် ရပ်ရပ်ဝတ်စား ထားတဲ့ ယောက်ျားတစ်ဦးက သူ့ကိုယ်သူ ကုမ္ပဏီ အရောင်း ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်နဲ့ သူမကို ရည်ရည်မွန်မွန် မိတ်ဆက်ရင်း ပစ္စည်းဝယ်ဖို့ […]
အချစ်မှာ ထူးဆန်းတဲ့ မှော်စွမ်းအင်ရှိတယ်လို့ လူတစ်ချို့ကပြောကြပါတယ်။ ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုလွမ်းတဲ့အခါ သူတို့ကိုယ်တိုင်က ဖွင့်မပြောရင်တောင် သဘာဝတရားကြီးက သူတို့အစား ပြောပေးတတ်ပါတယ် လူတစ်ယောက်က သင့်ကို ဖွင့်မပြောပဲ တိတ်တိတ်လေးအရမ်းလွမ်းနေတယ်ဆိုတာကို သိနိုင်မယ့်လက္ခဏာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …. ။ (၁) အိပ်မက်မက်တယ် အိပ်မက်ဆိုတာ စိတ်ဝိညာဉ်မှာဖြစ်နေတဲ့ အရာတစ်ခုပါ […]
ဖုန်းကိုင်တဲ့ ပုံစံက ဖော်ပြနေတဲ့ သင့်ရဲ့အကျင့်စရိုက်
သင် ဖုန်းကိုင်တဲ့ ပုံစံ က သင့် အကျင့် စရုိုက် ကို ဖော်ပြနေတယ် ဆိုတာ သိပါသလား …? ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ။ ဖုန်းကိုင်တဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီး သူ့ရဲ့အကျင့်စရုိုက်တွေကို ခန့်မှန်းလို့ရနေတယ်ဆိုရင် အံ့သြဖို့ကောင်းပါသလား။ ပုံထဲမှာကြည့်ပြီးတော့ သင်ဘယ်လိုအကျင့်စရုိုက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာ ဖတ်ကြည့်ပါလား။ မှန်တယ်ဆိုရင် သင်ကဘယ်နံပါတ်လဲဆိုတာ ကွန်မန့် မှာရေးပေးသွားပါဦးနော် …. […]
အပျင်းကြီးတဲ့ တနင်္ဂ​နွေ .. ချစ်​စရာ​ကောင်းတဲ့ တနင်္လာ
အပျင်းကြီးတဲ့ တနင်္ဂ​နွေ .. ချစ်​စရာ​ကောင်းတဲ့ တနင်္လာ အပျင်းကြီးတဲ့ တနင်္ဂ​နွေ အပျင်းကြီးတယ် ။ဘယ်လောက်ပျင်းသလဲဆိုရင် ပျင်းဖို့တောင်ပျင်းနေတဲ့သူတွေ။ ဥာဏ်ကောင်းတယ်။ အခြားသူတွေအမြင်မှာတော့ လူလိမ္မာလေး အိမ်မှာဆိုအော်ကြောလန် ချောတာမျိုးမဟုတ်ဘူး ချစ်ဖို့ကောင်းကြတယ်။ မသိတဲ့လူတွေနဲ့ကျရင်တော့ ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ မာနကြီးတဲ့ပုံ ။ တကယ့်အကြောင်းသိသူငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာတော့ ငပေါ။ အနေအေးတယ်​လို့ထင်​ရ​ပေမယ့်​ တကယ်​​တမ်းကျ ကုပ်ကမြင်း။ […]
ရင့်ကျက်တဲ့သူတွေ နားလည်ထားတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အချစ်ရေးဆိုတာ
အချစ်ဆိုတာမျိုးက အသက်အရွယ်နဲ့ အနေအထားကို လိုက်ပြီး ချစ်တဲ့ပုံစံတွေ မတူကြပါဘူး။ ချစ်သူစုံတွဲတွေကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် တူညီတဲ့ ပြဿနာတွေ ရှိနေတတ်သလို မတူညီကြတာတွေလည်း ရှိနေကြပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ချစ်သူစုံတွဲတွေကတော့ စိတ်ဆိုးလိုက်၊စိတ်ကောက်လိုက်၊ပြန်ချစ်လိုက်နဲ့ ဖြစ်နေကြတာများပါတယ်။ ရင့်ကျက်လာတဲ့သူတွေကတော့ ဒီလိုချစ်ခြင်းမျိုးကို မနှစ်သက်ကြတော့ပါဘူး။ သူတို့က အချစ်ရေးကို ဒီလိုမျိုး နားလည်လက်ခံထားကြပါတယ်။ (၁) […]
ကျောင်းဆက်တက်ရမှာမို့ Winner ဆုမပေးခဲ့တာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကို အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ အေးမြဖြူ
ကျောင်းဆက်တက်ရမှာမို့ Winner ဆုမပေးခဲ့တာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကို အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ အေးမြဖြူ ပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော်အေးမြဖြူကတော့ မြန်မာအိုင်ဒေါရဲ့အသက်အငယ်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Top-3 ထိတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အရည်အချင်းပြည့်မီသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် စိတ်ထားပြည့်ဝတာကြောင့် ပရိသတ်အားလုံးရဲ့ချစ်ခင်အားပေးခြင်းကို ရရှိထားသူတစ်ယောက်ပါ။ အမျိုးသမီးပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားသာတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ပရိသတ်အချို့ကတော့ အေးမြဖြူကို Winner အဖြစ်ခန့်မှန်းခဲ့ကြပြီး ထင်သလိုမဖြစ်လာတဲ့အခါ အေးမြဖြူက ကျောင်းဆက်တက်ရမှာမို့မြန်မာအိုင်ဒေါရဲ့အကျိုးအမြတ်အရWinnerမပေးခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်သံတစ်ချို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အေးမြဖြူကိုမေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ “အဲ့ဒါကတော့မဟုတ်လောက်ပါဘူး […]
ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယို သရုပ်ဆောင် မယ်လိုဒီဟာ လှပကြည်လင်တဲ့ မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ကိုရီးယားမင်းသမီးလေးလို လှပတာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အပြည့်အဝ ရရှိထားသူပါ။ မယ်လိုဒီက အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်ပိုင်း သူမရဲ့သားလေး သိဒ္ဒိစစ်ကို ပိုပြီးအချိန်ပေးနေရတာကြောင့် အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ အရင်လောက် အများကြီး မလုပ်ကိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပရိသတ်တွေက မယ်လိုဒီရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို […]
သစ်တစ်ချောင်းကို ဘယ်ဈေးရောင်းရမလဲ တွက်နည်း၊ ရေဂါလံ တွက်နည်း နှင့် မြေဧက တွက်နည်းများ
ရေ၀င်ဆန့်တွက်နည်း ၊ သစ်တွက်နည်း ၊ မြေတွက်နည်း ၊ ဘိလပ်မြေတွက်နည်း (1)ရေ၀င်ဆန့်တွက်နည်း အုတ်ရေကန်ဝင်ဆန့်မှု တွက်ချက်နည်းကပိုလွယ်ပါတယ် အလျား×အနံ×အမြင့်=ကုဗပေ ရတယ် အဲဒီကုဗပေနဲ့ ၁ ကုဗပေမှာ ရေ ၆•၂၅ ဂါလံ နဲ့ မြှောက် ရတာဝင်ဆန့်တဲ့ ရေဂါလံပေါ့ (2)သစ်တွက်နည်း မြန်မာလက်သမားတို့၏သစ်တွက်နည်းဝေမျှပါသည်။ သစ်တစ်တန်=၄၀၀လက္မ […]